Odeeffannoo fi maddootaa qarqaarsaa waa’ee talaallii keeti COVID-19 tiini - King County
Odeeffannoo fi maddootaa qarqaarsaa waa’ee talaallii keeti COVID-19 tiini
Waa’ee talaallii COVID-19 keessan irratti odeeffannoo fi madda gargaarsaa
Maddawwan gargaarsa kun waa’ee talaallii COVID-19 odeeffannoo barbaachisoo, galmee talaallii keessanii ilaaluf Sarara irratti akkaataa itti galmooftan, fi odeeffannoo barbaachisoo biraa waa’ee iciitii dhuunfaa fi kaffaltii dabalatu. Yoo waa’ee COVID-19 irratti gaaffiiwwan dabalataa qabaattan, maaloo bakkee talaallii tti ykn doktara ykn nama kunuunsa fayyaa isinii kennu gaafadhaa.
Waraqaawwan dhugaa talaallii COVID-19
Waraqaawwan kanaa gadii omishtootan uumaman waa’ee talaalliicha irratti odeeffannoo baldhaa dhiyeessuf; eenyuu akka talaallii fudhatuu fi hin fudhanne, warra talaallii isinii dhiyeessuf otoo talaallii hin fudhatin maal akka ibsuu qabdan, fi odeeffannoo waa’ee dhiibbawwan cinaa dhalachuu danda’anii.
Waraqaa Dhugaa Talaallii Pfizer- Biontech
Waraqaa Dhugaa Talaallii Moderna
Waraqaa Dhugaa Talaallii Johnson & Johnson (Janssen)
Dhuma waraqaa jala Eeyyama Fayidaa Muddamaa (EUA) irratti akkatti talaallii kun Bulchiinsa Nyaata fi Qorichaatin (FDA) raggasifame ibsi gabaaban ni jira. Jecha bitaa nama galuu danda’u jalqaba waraqaa irra jiru ibsuuf gargaara: "COVID-19 ittisuu isaatiif talaalliin Bulchiinsa Nyaataa fi Qoricha (FDA) U.S. tiin mirkanaa’ee hin jiru."
Waa’ee raggasifamuu COVID-19 waan beekamuu qabu:
Talaalliiwwan kun FDA dhaan muddamaaf fayyadamuuf raggasifaman, kana jechaan yeroo muddama biyyoolessaa fayyadamuuf eeyyamni kenname, garuu eeyyama guutudhaaf raggasifamuu wajjin tokkoo miti.
Talaalliiwwan kanaafi sadarkaan FDA sadarkaawwan nageenya fi bu’a qabeessummaa guutaman. Talaalliiwwan sadarkoota kana guutan qofatu erga qorannoo jajjabaa namoota kumatamaan lakka’amaniin fi ogeeyyii yaalaa walabaatin ilaalamanii booda fayidaa muddamaa irra oolu.
Maaloo gaafii dedeebi’amanii gaafatamani keenya "Eeyyamni Fayyadamuu Yeroo Muddamaa (EUA) maal?" odeeffannoo dabalataatif ilaalaa.
Odeeffannoo waa’ee V-safe, bilbila harkaa keessaniif ilaaltuu fayyaa
"V-safe" iin meeshaa bilbila harkaa irratti hundaa’e ergaa barruu fi qo’annoo weebii fayyadamuun erga talaallii COVID-19 fudhatanii ilaalcha fayyaa dhuunffaa keessanii isinii dhiyeessa. Talaallii lammataa akka fudhaatan isin yaadachisaa. Erga talaallii COVID-19 fudhattanii booda dhiibbawwan cinaa yoo qabaattan CDC tti himuudhaaf V-safe fayyadamuu ni dandeessu.
Barruu galmaa'uu V-safe
Waa'ee V-safe irratti odeeffannoo dabalataa
Dhiibbawwan cinaa irratti mal godhu akka qabdan
Bakkeewwan talaallii martuu namni tokko alarjii yoo qabaatan adda baasuu fi deebii kennuuf ogeeyyii fayyaa leenji’an qabu. Erga talaallii keessan fudhatanii daqiiqaa 15 ni ilaalamtu yoo barbaachise akka gargaaramuu dandeessaniif. Yoo dhiibbaa cinaa kamuu argitan, maloo miseensa hojjattootaa beeksisaa.
Yoo alarjii hamaan isin mudate, 9-1-1 bilbilaa ykn hoospitaala isinitti dhiyaatu deemaa. Yoo dhiibbawwan cinaa isin yaaddessan ykn isin irraa deemuu didan qabaattan, hakima keessaniif bilbilaa.
Dhiibbawwan cinaa xiqaa qabaachuu dandeessu kan mallattoo baratamoo qaamni keessan tika ijaaraa jiraachuu isaa agarsiisu. Namootni tokko tokko mallattoowwan akka bowwoo, dhukkubbii harkaa, dadhabbii, oo’aa qaamaa ykn dhukkubbiiwwan irree qabaachuu malu. Dhiibbawwan cinaa kun dandeettii hojii guyyaa guyyaa hojjachuu keessan irratti dhiibbaa qabaachuu malu, garuu guyoota xiqaa keessatti deemuu qabu. Namootni tokko tokko dhiibbawwan cinaa kamiiyyuu hin qaban.
Dhiibbaa cinaa ulfaata Sirna Gabaasa Taatee Hamaa Talaallii FDA/CDC (Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)) tti gabaasaa. Lakkoofsa VAERS 1-800-822-7967 bilbilaa ykn onlaayin https://vaers.hhs.gov/reportevent.html irratti gabaasaa. Unka gabaasaa keessatti maqaa talaallii fudhatanii sarara tokkoffaa saanduqa #18 irratti dabalaa.
Unka Iciitii fi Waliigaltee Fayyaa Hawaasaa – Siyaatil fi King Kaawuntii irraa
Unka iciitii fi Waliigaltee buusaa. Unka kun Fayyaan Hawaasaa akkattii odeeffannoo fayyaa keetii dhuufaadhaan itti qaban odeeffannoo akka sii kennan beekkumsa kennuuf. Yoo inshuransii qabaattan akka inshuraansii keessan kaffaltiin gaafatmu eeyyama. Unka kun Fayyaa Hawaasaa – Siyaatil fi King Kaawuntii irraa talaallii (“yaala”) fudhachuuf akka waliigaltan kataba.
Beeksisa Hojiiwwan Icittii Eeguu
Unkaa Hayyama Talaalli COVID-19
Galmee talaallii seeraa maatii keessanii onliniin qaqqabaa/argadhaa
Karaa “MyIR” tiin Damee Fayyaa Isteeta Waashingtan irraa Galmee talaallii seeraa maatii keessanii argachuuf onliniin galmaayuu ni dandeessu.
Odeeffannoo akkatti "MyIR" dhaaf galmaa'anii
Odeeffannoo Talaallii Maatii Keessanii Qaqqabaa/argadhaa
Waa’ee talaallii COVID-19 odeeffannoo online
Wa’ee argamuu Talaallii COVID-19 odeeffannoo haaraa, odeeffannoo nageenyaa fi misooma talaallii COVID-19, fi Fayyaa Hawaasaa – Siyaatil fi King Kaawuntii irraa gaafiiwwan deddeebi’amanii gaafataman argadhaa: www.kingcounty.gov/covid/vaccine/oromo
Odeeffannoo bal'dha wa'ee talaallii COVID-19 CDC irraa
Odeeffannoo waa'ee tamsaassii fi akkataa talaallii COVID-19 f dursi/dur-duubee kennamuu Damee Fayyaa Isteeta Waashintan irraa
Link/share our site at www.kingcounty.gov/yourvaccine/oromo